ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: ဖတ်ဖူးသမျှ ဟာသများ
ညချစ်သူ | 10:56 PM | ဟာသ
ရယ်မောခြင်းသည် အသက်ရှည်စေတယ်တဲ့ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းအားလုံး ဘ၀အမောတွေကို ရယ်မောခြင်းဖြင့် ဖြေဖျောက်နိုင်ကြပါစေသော် ။
အလုပ်မအားတာနဲ့ စာမရေးအားလို့ဟာသလေးတွေပဲ အရင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
အားပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို လေးစားခင်မင်စွာဖြင့်
သူ့ဘာသာသူ အေးအေးလူလူ ဆေးလိပ်ထိုင်သောက်နေတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို လမ်းသွားလမ်းလာ မိန်းမတစ်ယောက်က ဆရာမကြီးအထာနဲ့ မေးခွန်းထုတ်လာပါတယ်။
မ။ ရှင် ဆေးလိပ်သောက်တတ်တယ်ပေါ့။
ကျား။ ဟုတ်ကဲ့ သောက်တတ်ပါတယ်။
မ။ တစ်နေ့ကို ဘယ်နှစ်ဗူးသောက်သလဲ။
ကျား။ သုံးဗူး သောက်ပါတယ်။
မ။ တစ်ဗူးကို ဘယ်လောက်ပေးရလဲ။
မ။ ဆေးလိပ် စွဲသောက်နေတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။
ကျား။ ဆယ့်ငါးနှစ်လောက်တော့ ရှိပြီထင်ပါတယ်။
မ။ ဒါဆို ဆေးလိပ်တစ်ဗူးကို တစ်ထောင်ငါးရာ၊ တစ်ရက်ကို သုံးဗူးဆိုတော့ လေးထောင်ငါးရာ၊ တစ်လကို တစ်သိန်းသုံးသောင်းငါးထောင်လောက် ကုန်ပြီပေါ့။ တစ်နှစ်ဆိုရင် တစ်ဆယ့်ခြောက်သိန်း လေးသောင်းနှစ်ထောင့်ငါးရာ ကုန်ကျမနေဘူးလား။
မ။ တစ်နှစ်ကို အဲသလောက်ကုန်တယ်ဆိုရင် ရှင်သောက်လာတာ ဆယ့်ငါးနှစ်ဆိုတော့ နှစ်ရာလေးဆယ့်ခြောက်သိန်း သုံးသောင်း ခုနှစ်ထောင်ငါးရာ ဖြုန်းခဲ့သလို ဖြစ်မနေဘူးလား။
မ။ အဲသည့် ငွေဟာ ငွေကြေးဖောင်းပွနှုန်းနဲ့တွက်ရင် သိန်းသုံးရာကျော်လောက်ရှိမသွားနိုင်ဘူးလား
မ။ တကယ်လို့ ရှင်သာ ဆေးလိပ်မသောက်ခဲ့ပဲ အဲဒီပိုက်ဆံတွေကို ဘဏ်မှာစုထားနိုင်ခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတစ်ခုခုကို လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်ငါးနှစ်က စလုပ်ခဲ့ရင် ခုချိန်မှာဆို နောက်ဆုံးပေါ်ပြိုင်ကားတောင် ဝယ်မစီးနိုင်ပေဘူးလား။ ရှင်ကိုယ်ရှင် နားလည်ဖို့သင့်တယ်။
ကျား။ ခင်ဗျားကော ဆေးလိပ်သောက်လား။
ကျား။ေxာက်ကောင်မ အဲလိုသာတွက်ကြေးဆို နင့်ပြိုင်ကားဘယ်မှာလဲပြောစမ်း။
မေးမြန်းဖော်ထုတ်ဖို့ အစီအစဉ်တစ်ခု လုပ်လိုက်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးမျိုးကို ဘယ်လိုများ တည်ဆောက်ခဲ့ ကြပါသလဲ ခင်ဗျာ?
နည်းနည်းရိုင်းပုံရတယ်ဗျ။ လမ်းမှာ သွားနေရင်းနဲ့ပဲ အဲဒီမြင်း
ပြောပါတယ်။ ပြောပြီးတော့ သူလည်း မြင်းကျောပေါ်ပြန်တက်ပြီး ခရီးဆက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ။
ခဏအကြာမှာ စောစောကလိုပဲ ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာလည်း ကျွန်တော့်မိန်းမက
ဆက်သွားကြပြန်ပါတယ်။ တတိယအကြိမ်မြောက် မြင်းက ခါချတဲ့အခါမှာတော့
ရှင့်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်နော်..." တဲ့။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး ကျွန်တော်တို့တွေ
ဘာပြဿနာမှမရှိဘဲ နှစ်ယောက်အတူတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေလာခဲ့ကြတာပါပဲဗျာ..."
၆ရက်အကြာ..... ငါ နင့်ကိုချစ်တယ်၊ ငါ နင့်ကိုချစ်တယ်။
၆လအကြာ....... အင်း ဟုတ်တယ်.. ချစ်ပါတယ်။
၆နှစ်အကြာ...... အော်.. နင့်ကို မချစ်ရင် ငါလက်ထပ်ခွင့်တောင်းပါ့မလား?
၆ရက်အကြာ..... အချစ်လေးရေ.. မောင်ပြန်လာပြီ
၆နှစ်အကြာ...... ငါပြန်လာပြီကွ.. ထမင်းကျက်ပြီလား?
၆ရက်အကြာ...... ချစ်မိန်းမရေ.. ချစ်မိန်းမနဲ့ ပြောချင်လို့တဲ့
၆လအကြာ........ ရော့ မင်းဖုန်း!
၆နှစ်အကြာ........ ရော်.. ဖုန်းကိုင်လိုက်လေ
၆ရက်အကြာ...... ဝါး.. အစားအစာတွေ ဒီလောက်အရသာရှိမှန်း ခုမှပဲသိတော့တယ်
၆လအကြာ........ ဒီည ဘာစားမလဲ?
၆နှစ်အကြာ...... လာပြန်ပြီ.. ဒီဟင်း!
၆ရက်အကြာ..... ဟာ... ဒီအင်္ကျီဆို ချစ်လေးက နတ်သမီးလေးအတိုင်းပဲ
၆နှစ်အကြာ..... မင်း ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်လောက်ဖြုန်းခဲ့ပြန်ပြီလဲ?
၆ရက်အကြာ...... ချစ်လေး.. ဒီညမောင်တို့ ဘာအစီအစဉ်ကြည့်မလဲ?
၆လအကြာ........ ဒီကားကြည့်မယ်.. ဒီကားကြိုက်တယ်။
၆နှစ်အကြာ....... ဒီကားကြည့်မယ်။ မင်း မကြည့်ချင်ရင် သွားအိပ်တော့..
တတ်လို့၊ သိလို့ ရေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ "အော်..မိန်းမ" ကို ဖတ်ပြီး "အော်..
ယောက်ျား"လည်း ရေးပါအုန်းဆိုလို့ ဖတ်ဖူးတာလေးတွေကို ရယ်ရအောင်